Putin oo amray 755 Diblumaasiyiin Maraykanka ah inay ka baxaan dalka Ruushka – Balcad.com Teyteyleey
Putin oo amray 755 Diblumaasiyiin Maraykanka ah inay ka baxaan dalka Ruushka
Labada Aqal ee Baarlamaanka Maraykanka ayaa ansixiyey in cunaqabateyn horleh la saaro Ruushka taasi oo jawaab u ahayd farogelintii la sheegay inuu Ruushka ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee 2016 iyo waliba dagaalada uu Ruushka ka wado Ukraine iyo Siiriya.
“….In badan baa sugeynay inay xaalada isbedasho oo ay wanaagsanaato xiriirka labada dal, balse taasi ma dhicin, mana fileyno in dhawaan arrintan wax iska bedalaan….” ayuu yiri Putin oo Axadii shalay wareysi siiyey telefishinka dowlada Ruushka.
Tirada Diblumaasiyiinta Maraykanka ee Moscow laga saarayo ayaa ah kala bar shaqaalihii Safaarada Maraykanka ee wadankaasi Ruushka.
Xukuumada Moscow ayaa sheegtay inay sidoo kale weli ka fekerayso inay xayiraad kale oo dheeraad ah sii saarto Maraykan
The post Putin oo amray 755 Diblumaasiyiin Maraykanka ah inay ka baxaan dalka Ruushka appeared first on Ilwareed Online.